नागरीक सचेतना केन्द्रले जन्माएको नेतृहरुः पार्वती बुढा र सोना मिझार - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिका वडा नं. ९ को मोतियाफाँटा बिशेष गरि दलित अति विपन्न समुदाय बसोबास बाहुल्य रहेको एक बस्ती हो । नगरपालिकोको सबै भन्दा कुनामा रहेको यो गाउँमा १२५ घरधुरी रहेको छ भने गाउँको पश्चिमी भाग भारतको दुदुवा राष्ट्रिय निकुन्जको घनघोर जंगलसंग जोडिएको छ । यस बस्तीमा बसोबास गर्ने बाहेक अरु खासै यस क्षेत्रमा पुग्दैनन् र पुग्ने कारण पनि हुदैन् । यहाँ जता हेर्यो अभावै अभाव मात्र देखिन्छ । यो बस्तीलाई राज्यले नै विर्सिएको जस्तो देखिन्छ ।
यसलाई मध्यनजर गरेर समाजमा उपेक्षित, उत्पीडित दलित, जनजाति, महिला तथा अति विपन्न समुदायको आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरण गर्दै स्थानीय शासन व्यवस्थामा उनीहरुको सहभागिता बृद्धि गर्न २०६७ सालमा स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास परियोजना र पुनर्वास नगरपालिकाको सहकार्यमा यहाँ मोतियाफाँटा नागरीक सचेतना केन्द्र स्थापना भएको थियो ।
अशिक्षा र चेतनाको अभावले भनेका कुराहरु नबुझ्ने, सजिलै अरुलाई विश्वास नगर्ने, घरका पुरुषहरुले समूहमा जान वा संगठित हुँन नदिने जस्ता समस्याहरु सुरुवाति दिनहरुमा सामना गर्नु परेको थियो । दुई जनाको अगाडि आफ्नो नाम समेत भन्न नसक्ने समूहमा सामाजिक बिषयमा छलफल गर्न÷गराउन, बचत गर्ने बानी बसाल्नु एउटा ठूलो चुनौतीको विषय थियो । विस्तारै सामाजिक परिचालिकाले उनीहरुको विश्वास जितेर सचेतना केन्द्रमा उनीहरुलाई संगठित गर्न सफल भए ।
फलतः आज समय परिवर्तन भएको छ । सामाजिक परिचालिका सरस्वती विष्टको कामले आज सकारत्मक नतिजा देखाउन थालेको छ । नागरीक सचेतना केन्द्रले समूहका सदस्यलाई एक आपसमा जोड्ने पुलको रुपमा भुमिका खेलेको छ । अहिले एक अर्काको सवालमा चासो दिन थालेका छन् । अहिले गाउँ घरमा केहि समस्या परेमा तुरुन्त बैठक बस्छ । छलफल हुन्छ र समाधानको बाटो खोजिन्छ । गाउँको विकास निमार्ण देखि साना तिना समस्यालाई समूह आफैले समाधान गर्छ ।
त्यहि समूहमा थिईन, अति विपन्न समुदायिकी ‘पार्वती बुढा’ र एकल महिला तथा दलित ‘सोना मिझार’ । त्यो अनकन्टार बस्तीमा उनीहरुको जिवन कथा पनि त्यत्तिकै कष्टकर थियो । सामान्य मेला पर्म, घाँस दाउरा र घरको धन्दामै दिन वित्थ्यो उनीहरुको । त्यसमा पनि सोना मिझारको अवस्था अतिविपन्न भएको कारण जो महिला भएका कारण, दलित भएका कारण, एकल महिला भएको कारण, र गरिब भित्र पनि विकल्प विहीन भएको कारण उनले सहनु पर्ने उत्पीडन तथा उपेक्षा अन्य महिलाको तुलनामा अन्त्यहीन जस्तै थियो ।
आफैमा गरिबी चपेटामा पिल्सीएको समाजबाट उनीहरुलाई सहयोग पुग्ने कुरा नै थिएन् । सबै अभावै अभावमा पिल्सीएका थिए । कसैले कसैको दुख सुःखमा चासो नै राख्दैन थिए । नत् एक अर्काको बारेमा सोच्ने चेतना नै थियो । ‘आर्थिकरुपले त हामी गरिब थियौं नै, सामाजिकरुपमा पनि हामी विखण्डित र गरिब नै थियौं ।’ पुराना दिन सम्झीदै मिझार भन्छिन् ।
अहिले हरेक सामुहिक र सामाजिक गतिविधिमा पार्वती बुढा र सोना मिझारको भुमिका सधै सकृय रहने गरेको छ । बुढा समुहकी संयोजक छिन् भने मिझार सदस्य । हिजो सम्म आ–आफ्नै तरिकाले बाचिरहेका गाउँलेहरु आज एक अर्कालाई परेको बेला एक जुट हुने गर्दछन् । मोतियाफाँटाको त्यो बस्ती आज एक घर र त्यहाँका बासिन्दाहरु एकै घरको परिवार जस्तै भएका छन् । त्यसैले उनीहरु आफ्नो गाउँलाई ‘कलोनी’ भन्ने गरेका छन् ।
नागरीक सचेतना केन्द्रमा आफ्नै गाउँ घरका बिषय बस्तु, पहिचान गरिएका समस्याहरु माथि छलफल हुँने हुनाले उनीहरु क्रमस् हरेक छलफलमा सकृय हुँने मात्र नभई अरुलाई समेत सहभागि हुँन उत्प्रेरित गर्न थाले । नागरीक सचेतना केन्द्रमा नागरिकको अधिकार र कर्तव्य, व्यक्तिगत घटना दर्ता, स्थानीय निकाय तथा राज्यले उपलब्ध विभिन्न सेवाहरु र सेवा लिनका लागि पुरा गर्नु प्रकृयाको बारेमा समूह र गाउँलेलाई सिकाउन थाले । परेका बेला उनीहरु नगर देखि जिल्ला सम्म पुगेर सरोकारवालासंग दुखी गरिबको लागि बोलिदिन पछि पर्दैनन् । हिजो सम्म आफ्नो नाम पनि भन्न नसक्ने उनीहरु आज आफ्ना छवीलाई एक असल समाजशेवीको रुपमा विकास गर्दै लगेका छन् ।
सचेतना केन्द्रमा आवद्ध भए पछि उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत सुधारिदै गएको छ । मिझारले सचेतना केन्द्र र विभिन्न समूहबाट ऋण लिएर बाख्रा पालन पनि गरेकी छिन् । भने बुढाले समूहबाट ऋण लिएर भौसी तथा बाख्रा पालन गरेकी छिन् । लिएको ऋण अब थोरै रकम मात्र तिर्न बाँकी छ । गाउँ घरमा मेलापात, खेतीपाति गरेर विभिन्न वित्तिय समूह, सहकारीहरुमा उनीहरु सदस्य भएका छन् । बचतहरु गरेका छन् । आर्थिकरुपमा पनि उनको अवस्था क्रमस सुधारउन्मूख हुँदै गईरहेको छ ।
उनीहरुको सकृयताका कारण सामाजिक रुपमा पनि उनीहरुको पद र सम्मान वढ्दो छ । अहिले मिझार नगरस्तीय एकल महिला सञ्जालको सचिव पनि छिन् । हिजो सम्म आफ्नो नाम पनि भन्न नसक्ने उनी आज एकल महिलाले आयोजना गर्ने विभिन्न कार्यक्रममा उनी निर्धक्क भएर सचिवको हैसियतले रोष्टममा उभिएर कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्छिन् । भने बुढा पनि विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा निकै सकृय छिन् । २०७४ जेष्ठ ३१ गते हुँने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले मिझारलाई पुनर्वास नगरपालिकाको वडा नं. ९ बाट दलित महिलामा उम्मेदवारमा निर्विरोध चयन गरेको छ भने बुढालाई वडाको महिला सदस्य उम्मेदवारमा सिफारिस गरेको छ ।
समाज सेवासंगै आजभोली उनीहरु आ–आफ्नो चुनावी प्रचार प्रसारमा पनि व्यस्त हुन थालेका छन् । उनीहरुले चुनाव जिते भने मोतियाफाँटामा विकास पुग्नेछ । यहाँका सुकुम्बासीहरुको जिवनमा सुधार आउनेछ भन्ने आशमा छन् स्थानीयवासीहरु । गाउँका सबै महिला पुरुषले उनीहरुलाई साथ दिएका छन् । आफ्ना सकृयताका कारण उनीहरुले आफुलाई सोना मिझारज्यू र पार्वती बुढाज्यू भनेर सम्बोधन गर्ने सामाजिक हैसियस बनाईसकेका छन् । आज उनीहरु सम्मानित जिवन बाचिरहेकी छिन् ।
लेखिका पुनर्वास नगरपालिका, कञ्चनपुर, कार्यक्रम अधिकृत